ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော်တံတားပြီးခင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော်တံတားပြီးခင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။
ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော်တံတားပြီးခင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။
Posted by ster on Mar 28, 2012 in Copy/Paste | 25 comments
ရုံးချိန် တွေဆို အရမ်းဆိုးတယ်။ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေအနေနဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ ကုန်ကားတွေ ဆီက ပေးတဲ့ပိုက်ဆံ မယူဘဲ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရင် ကောင်းမယ်။ စည်းကမ်းမဲ့ ကားတွေကြားမှာ နေ့တိုင်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ အိမ်ပြန်နေရတယ်။ ဒါတောင် တံတားက မစသေးဘူး။ ဘယ်လိုအစီအစဉ် တွေရှိထားတယ် ဆိုတာလဲမကြေညာထားဘူး။
တခြား စာဖက်နေသူတွေ.. အဲဒီတင်ပြတဲ့အပေါ်မှာ.. ဝေဖန်ပြောရခက်ပါတယ်..
နောင်ဒီလို ကိုယ့်(Opinion) အသံဆိုရင်.. ဖိုရမ်သွားရေးပေးပါနော..
( ပထမဆုံး ပို့စ်မို့.. မဖျက်ပဲထားလိုက်ပါ့မယ်..)
ခုတလော.. ဒီလိုစာတွေအတွေ့များနေသလားလို့ပါ.. :?
Thank you! ko kai, I just want all know what happening here. This is first time for me and very bad connection at last night. And I am still learning how to writeapost by phone.
သဂျီးရေ… ဒီစာလေးကိုတော့ မဖျက်ပစ်ပါနဲ့ … .။ ဘုရင့်နောင်တံတားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ .. နည်းနည်းပွားစရာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ် … ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရလို့ .. ပို့စ်အနေနဲ့ မတင်ဖြစ်ပါပဲ ..အ ခုမှသာ ကော့မန့် အနေနဲ့ ဝင်ရေးပါဦးမယ် … ။ နေ့စဉ်ဖြတ်သွားနေရတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ အမြင်မျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးပါဦးမယ် …. ။
(ခဏနေမှ .. အခုတော့ အလုပ်များနေတုန်း .. ဟီး.. ဟီး .. )
ဒါဆို ယာဉ်ကြောပိတ် ဒုက္ခနေ့တိုင်းခံစားနေရတဲ့ မနော ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေ တင်လိုက်ရမလား… လှည်းတန်းထက် ပိုဆိုးနေတယ်။ ဒီကြားထဲ ပွဲရုံက ထွက်တဲ့ကားတွေကို မော်တော်ပီကယ်က အပြင်ထုတ်ထုတ်နေတာ ပိုဆိုးနေပါရောလား… အိမ်ကလည်း ညသန်းခေါင်မှပြန်ပြန်ရောက်နေလို့ ဆူခံထိနေရပြီ…
အစ်မမနောကလည်း .. ဖောတော့မယ် …သူ့ဘာသာသူ သက်ကြီးခေါင်းချချိန်မှ လျှောက်သွားနေပြီးတော့ .. ဟီး
ညသန်းခေါင်ထိ ဘုရင့်နောင် တံတား မပိတ်ဖူးသေးဘူး … ။ ပိတ်တဲ့အချိန် အများစုက … ရုံးဆင်းချိန်တွေမှာပါပဲ .. မနက်ပိုင်းလည်း … ပိတ်ပေမယ့် ..သွားလို့မရလောက်အောင်ကို မပိတ်ဖူးသေးဘူး .. 26/Mar ညနေပိုင်းကားပိတ်တာတော့ .. စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ် … သုံးလေးနာရီလောက်ကို .. ကားတွေ လှုပ်မရတော့ဘူး … ။
ဘုရင့်နောင် တံတားပေါ်မှာ ကားတိုက်တုန်းကတောင် ဆယ်နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ လမ်းကြောရှင်းသွားပြီ … ညသန်းခေါင်မှ အိမ်ရောက်တယ်ဆိုတာကတော့ .. အတ္တိသယ၀ုတ္တိအလင်္ကာတွေထည့်ပြောတာပဲ ဖြစ်မယ် … ။
ဓါတ်ပုံတွေရှိလျှင် တင်လိုက်ပါ ….. တခြား သူတွေလည်း ကြည့်လို့ရတာပေါ့ … ။
ညီမကတော့ … တိုင်ရီ ဆန္ဒပြတာ …ထွက်ရိုက်လို့ မန်မိုရီကဒ်လေး သိမ်းခံရကတည်းက … အခုထိ .. လွတ်လွတ်ကင်းကင်းပဲ ရိုက်တော့တယ် ..အဟီး … ။ ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံမှာ သေချာ ချိန်ရိုက်လို့မရဘူး … ကင်မရာတွေက ထောင့်ပေါင်းစုံက ချိန်ထားတယ် … ။
အောင်မယ်လေး သုံးလေးနာရီများပျင်းတောင်ပျင်းသေး။ ဟိုတခါ နှစ်ရက်တိတိ ပိတ်သွားသေး တယ်။ လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့တာ။ အဓိကက ပွဲရုံထဲက ကားကြီးတွေက လမ်းပြောင်းပြန်ကုန် ချတော့ လမ်းမှန်ဝင်လာတဲ့ကားနဲ့ ထိပ်တိုက်ဖြစ်ပြီး ရွေ့ မရတော့ဖြစ် ကုန်တာ။ အဲဒီ နှစ်ရက်ပိတ်တုန်းကလဲအဲလိုလမ်းပြောင်းပြန်ကုန်ချလို့တဲ့။ လမ်းပြောင်းပြန်ရပ်တဲ့ကားက ဘုရင့်နောက်ပွဲရုံဝင်းကော်မတီဝင်ရဲ့ကားတဲ့။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကလဲ အသိတယောက် သူ့ကား ကုန်ချဖို့ ဘူတာရုံလမ်းမှာစပိတ်တာ မနက် ၁၁ နာရီကတဲက တရွေ့ရွေ့သွားတာ ဘုရင့်နောင်ပွဲ ရုံဝင်းထဲကို ည ၁၁ နာရီမှ ရောက်သွားလို့တဲ့။ ကားသမားခမျာ မျော့ရော။
အစ်မသဲနုအေးရေ .. နှစ်ရက်တိတိပိတ်သွားတယ်ဟုတ်လား …. ။ ညီမတောင် မသိလိုက်ဘူး … ။
မှန်တာပြောရလျှင် …အဲ့လို နေ့လေးတွေ များများ ရှိချင်လိုက်တာ .. လမ်းပိတ်လို့ ရုံးလာလို့မရဘူးဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးချင်လွန်းလို့ အဟီး … ။
ရုံးပိတ်ရက်မတိုင်ခင်တရက်ရယ်၊ ရုံးပိတ်ရက်ပြီးနောက်ရက်ရယ်ဆိုပိုပိတ်တယ်။ ၂၆ ရက်နေ့က တနင်္ဂနွေ ပြီး တော့ အင်္ဂါကပိတ်ရက်ဆိုတော့ ကြားဖွင့်ရက်တရက်ပဲမို့ပိုပိတ်သွားတာ။ အမဆီလာတဲ့ဧည့်သည်ဆို အဲဒီနေ့က ညနေ ၆ နာရီမှရောက်တယ်။ အဲဒီမှာပိတ်လို့ ကားပေါ် ကဆင်း လမ်းလျှောက် ဆိုက်ကားငှား၊ ဆိုက်ကားပါထပ်ပိတ်လို့ ရပ်ကွက်ကြားထဲကဖြတ်၊ ခြေ ကျင်လျှောက်၊ အင်းစိန်လမ်းထိသွား။ အဲဒီကမှကားစီးနဲ့ အောင်မယ်လေးသူ့အစားမောတာ။
လှည်းတန်း မှာ လဲ ဆောက်နေတာပါ ဆိုတာ ထက် ရှင်းလင်း တဲ့ အဆင့် သာသာ ပေါ့။
Undergroung ကို အရင် ပြင်ဆင်နေတယ် လို့ ထင်တယ်။
ကားတွေ ကတော့ ပုံ မှန်သွားလို့ ရနေ တဲ့ အနေအထားဆို တော့ လောလောဆယ်တော့ ယဉ်ကြော ပိတ်ဆို့ မှု မတွေ့ရသေးဘူး။
အကြီးစားတည်ဆောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဘာပဲ ပြောပြော ယဉ်ကြော ပိတ်မှာ တော့ သေချာတယ်။
လမ်းလွဲ ကို ဘယ်လို စီစဉ်ထားတယ် ဆို တာတော့ ကြေညာဖို့ သင့် ပြီ တင်တာပဲ။
သူတို့ တာဝန်ရှိသူတွေ က မကြေညာ တော့ လဲ ရုံးချိန် မှန် လို သူ တွေ အတွက် ကတော့ ပုံမှန် ထက် နာရီဝက် စော ထွက် ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါဘဲ။
ပရိသတ်ကြီးရေ….. အဲဒီတံတားတွေ မပြီးခင်အထိ သွားရေးလာရေး ဒုတ်ခရောက်မှာ အသေအချာဘဲ…
ဘယ်တုန်းကများ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခဲ့ဘူးလို့လဲ…
စိတ်ရှည် သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့….
အဲဒါကြောင့်ပြောတာ ကျွန်တော်တို.လို မြို.ပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်တာ ကောင်းတယ်လို… အေးရော.. ဘာကားမှ မရှုပ်ဘူး..
အခုတောင် နဲနဲ ရှုပ်လာလို. ဒလ သွား အလုပ်လုပ်မလားစဉ်းစားနေတာ.. ဟဟဟ
ဘယ်လမ်းကသွားကြမလဲသိကြရင် post တင်ပေးကြဦးနော်
တံတားဒီဘက်မှာ နေတဲ.သူတွေက တော်တော်သည်းခံရပါတယ်။ ပြိုကျ ခါနိး စည်ပင် အမိူက်ကား တွေ တံတားပေါ် နေ.တိုင်းလိုလို လာပျက်တာတွေ၊ BUS ကားဂိတ် မဟုတ်ပဲ လမ်းပိတ် လူတင် နေတာတွေ၊ ကွေ.လမ်း အပြင်ဘက်က နှစ်ထပ်ကွေ.တာတွေ အမြဲတွေ. ရပါတယ်။
လမ်းဘေး platform မှာအပေါက်တွေဖြစ်နေတာတွေလည်း ဘယ်တော့ပြင်ကြမလဲမသိဘူးနော်။ ဈေးသွားရင်အရမ်းအန္တရာယ်များတယ်။ အပေါက်နေရာရောက်၇င် လမ်းပေါ်ကိုဆင်းသွားရတော့ ဘယ်အချိန်ကားတိုက်မလဲစိုးရိမ်နေရတယ်။
အဲ့ဒီကိစ္စ ကျွန်မလည်း ပြောချင်နေတာပါ … ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အခွင့်ရေးမရလို့ … နေ့စဉ် နေ့တိုင်း အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်နေတဲ့ အဲ့ဒီလမ်းကြီးကို … စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ကြည့်နေရတာ … ။ ဘုရင့်နောင် တံတား (၂) စီမံကိန်းလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ … ကား ခဏခဏပိတ်ပြီး လမ်းကျဉ်းတာကြောင့်လို့တော့ ထင်တယ်(သေချာတော့မသိဘူး.. ) ။
ဘုရင့်နောင်မီးပွိုင့်နဲ့ … ဘုရင့်နောင် တံတားဟာဆိုလျှင် .. .. crowded မဖြစ်တဲ့နေ့ မရှိသလောက်ပါပဲ .. တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးတောင် … လမ်းပိတ်တဲ့အခါ ပိတ်ပါသေးတယ် … ။ တစ်ဖက်ကလည်း … ဘုရင့်နောင် တံတားကိုဖြတ်ပြီး စက်မှုဇုံတွေဆီသွားတဲ့ကားတွေရှိတယ် … ၊စက်ရုံကားတွေရှိတယ် … ဖယ်ရီကားတွေရှိမယ် ..FMI အိမ်ယာဘက်က ကားတွေရှိမယ် …ဒါ့ပြင် … အခြေခံလူတန်းစား .. လက်လုပ်လက်စား အများစုနေထိုင်ရာရှိတဲ့အတွက် … လိုင်းကားတွေလည်းပေါတယ် …. ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေးကွင်းကိုသွားမယ့်ကားတွေလည်း ရှိတယ် … ဒါတောင် ကုန်တင်ယာဉ်တွေ ၊နာရေးယာဉ်တန်းနဲ့ … ကွန်တင်နာတွေ ၊ သစ်လုံးကားတွေ ဖြတ်ခွင့်မရပေလို့သာပါပဲ … ။ ဘုရင့်နောင်လမ်းစုံမှာ .. ပွဲရုံတွေလည်း ရှိတော့..ပွဲရုံဘက်က ကားတွေလည်းများပါတယ် ..
ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံနဲ့ ဘုရင့်နောင်တံတားက … ပြောရမယ်ဆိုလျှင် လူသွားကားသွားများပြီး .. လမ်းက ကျဉ်းပါတယ် … ဒါ့ပြင် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်တဲ့ … လိုင်းကားများ ၊ လက်ပြတိုးထွက်လာတဲ့ ပွဲရုံဘက်က ကားများ၊ကိုးလို့ ကန့်လန့် ရပ်ထားတဲ့ .. ပရိုက်ဗိတ်ကားများ ကြောင့်လည်း .. လမ်းပိုကျဉ်းစေပါတယ် … ။ နောက်တစ်ချက်က … မီးပွိုင့် မှာ ပြသနာ နည်းနည်းရှိနေတယ်လို့ .. ထင်မိပါတယ်(ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ .. ဒါပေသိ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်အထင် ) ။ ဖွင့်ချင်တဲ့ ယာဉ်ကြောကို .. အကြာကြီး တစ်မေ့တစ်မောဖွင့်ထားပြီး.. တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောကိုတော့ ..စောင့်စားစေတဲ့အခါမှာ … လိုင်းကားတွေက … ယာဉ်ကြောပြောင်းပြန်ကျော်တတ်ပြီး …. ဘုရင့်နောင်တံတားဘက်ကို ကွေ့ဖို့ .. တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာယူလာပါတယ် … ။ အဲ့ဒီအချိန် ကွေ့ကြောကိုလွှတ်ပေးတာ … စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ပြီး … ကျော်တက်ပြီး သူများ ယာဉ်ကြောဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင် လာကာ ကွေ့ဖို့ ဟန်ပြင်နေတဲ့ကားတွေ .. တစီတတန်းကြီးကွေ့လို့မရတော့ဘူး … တည့်တည့်လာနေတဲ့ လမ်းကြောကလည်း .. အဲ့ဒီအကွေ့ကားတွေ မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းကြောပြောင်းပြန်လာရပ်နေတာကြောင့် ရှေ့တိုးလို့မရ … ဒီတော့ … မီးပွိုင့်မှာတောင် လမ်းကြောင်းမှန်တာရော မမှန်တာရောမောင်းဖို့ထက် …. မိမိတို့ကား မပိတ်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး .. လမ်းပြောင်းပြန်ကွေ့တာတွေ .. .ဖောက်ထွက်တာတွေ လုပ်တော့တာပါပဲ … ။ ဒါနဲ့ .. ကားတွေ ဂျမ်းဖြစ်ကုန်တယ် .. အဲ့ဒီနေရာက …. မီးပွိုင့်ကလည်း .. လေးငါးမိနှစ်မှ တစ်ခါလောက်ပြောင်းတာ … (မှတ်မှတ်ရရ မီးပွိုင့်မိတိုင်းရေတွက်မိလို့ပါ … ) မီးပွိုင့်ပျက်လို့ … ယာဉ်ထိန်းရဲ လမ်းလည်ခေါင်ရောက်လာလျှင် … ပိုဆိုးပါတယ် … ။ တိတိကျကျ အချိန်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ … ။ လွှတ်ချင်တဲ့ဘက်ကို အကြာကြီးလွှတ်ပြီး တစ်ဖက်က ကားတွေကို စောင့်ဆိုင်းစေတာကြောင့် …. စိတ်မရှည်တဲ့ယာဉ်မောင်းများ .. လမ်းကြောပြောင်းပြန်မောင်းပြီး … လမ်းပိတ်ရပြန်တယ် … ။ ဒါတောင် မိုးတွင်းမရောက်သေးဘူး .. မိုးတွင်းဆို ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ် .. ။
ဒီဒုက္ခတွေကို သက်သာစေချင်လျှင် …. ဒစ်ဂျစ်တယ် မီးပွိုင့်လိုမျိုးထားသင့်ပါတယ် …. ။ သို့သော် … ဒစ်ဂျစ်တယ် မီးပွိုင့်ကိုလည်း .. မှန်မှန်ကန်ကန်ရေတွက်စေလိုပါတယ် … ။ မဟုတ်လျှင် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်လိုပဲ .. ဘက်မညီတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီးပွိုင့်တစ်ခု တိုးလာဦးမှာ မို့လို့ပါပဲ … ။ ယူနစ်တွေကို ..သူ့ဘာသာ ကောင့်မလုပ်စေပဲ ..ရပ်ထားတာမျိုး .. နှစ်ခါပြန် မီးနီပြတာမျိုးကလည်း .. လုပ်တတ်သေးတယ် … ။
e-tone ရေ ၊ စည်းကမ်းမရှိလို့ အဓိကဖြစ်ရတာပါ ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီးပွိုင့်လည်း မကယ်နိုင်ပါဘူး ။
ကယ်နိုင်တာက အမှန်ပြောရရင် မော်တော်ပီကယ်ရဲ ဘဲ။ သူတို့ ရှိရင် ကားမောင်းတဲ့ကောင်တွေ မှန်နက်ကပ်တဲ့ကောင်တွေနဲ့ သံရုံးကား (သူလည်း မှန်နက်တပ်တာဘဲ) ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေ နဲနဲ ရှိန်သွားလို့ သက်သာပါတယ် ။
မီးပွိုင့်တင် မကပါဘူး ၊ ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံ အ၀င်အထွက်၊ ကားပစ္စည်းဈေးမှာပါ ပေါင်းထိန်းနိုင်မှ မီးပွိုင့် ရှင်းနိုင်မှာပါ။ ဒီကြားထဲ သီရိမင်္ဂလာဟင်းရွက်ဈေး ကပါ အနားကပ်လာတော့ ……
ကားမောင်းသမားတွေ အပြစ်က အဓိကပါ။ အားလုံးကျော်မတက် ကိုယ့်လမ်းကြော ကိုယ် စိတ်ရှည်ရှည်မှန်မှန်မောင်းရင် မပိတ်ပါဘူး။
မော်တော်ပီကေ တွေကလည်း အဲ့ဒီလို စည်းကမ်းမရှိတဲ့ကောင်တွေ အရေးမယူတာက ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်ဖြစ်နေတာ။
ကြောင်လေးတို့တောသားတွေများ ဒီဒုက္ခမျိုး ကြုံဖူးပေါင်……….
ကျောင်းတုန်းက ဆရာမတွေကို နောက်တာ သတိရတယ်…။ နားလည်ပြီလားလို့ မေးရင် ” ပုံဆွဲပြပါဆရာမ” လို့နောက်ကနေ လိုက်အော်တာလေ…။ ခုလည်း ” ဒါ့ပုံ ရိုက်ပြကြပါဆြာမ ဒါမှ တောသားလေးတွေ မြင်ဖူးကြမှာ……..။
အခု မှစတင်တဲ. ကျွန်တော်.ရဲ.မပြည်.စုံတဲ.post ကို ကြိုဆို ဆွေးနွေးပေးတဲ. အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင်. etone ပြော တာတွေက ကျွန်တော် ပြောချင်တာတွေထက် တောင်ပိုပြည်.စုံနေလို. ကျေးဇူးအထူးပါပဲ။
ဓါတ်ပုံ ဆင်းရိုက်ဖို့က သိပ်မလွယ်ဘူး၊ မောဟတွေများနေတဲ့ လိုင်းကားတွေကြားမှာ အန္တရာယ်ကင်းအောင် မနည်းကြီုးစားနေရတယ်။ အခွင့်သာရင်တော့ ကားထဲကနေရိုက်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။
အဟဲ .. ဘေးထိုင် ဘုတောလိုက်ဦးမယ် ..
လှည်းတန်းတံတား အခုဆောက်ဖို့ လမ်းချဲ့နေတယ် ။ လမ်းချဲ့မှာ မို့လို့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် ဘယ်နေရာပြောင်းထားမယ် ဆိုတာ ကြို မတွေးသလို ကြိုလဲ လုပ်မထားပါဘူး ။ လမ်းညွှန်ထားဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေး .
အခုတော့ သစ်ပင်တွေလည်းခုတ် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်လည်းဖျက် ၊ ပြင်တာလည်း လမ်းပေါ်တက်လာ၊ ဘတ်စ်ကားစီးမဲ့ လူတွေ ခမျာ နေပူကြီး ဖုံတောထဲမှာ လမ်းပေါ်တက် ကားစောင့် နဲ့ ..
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု့ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တာ လည်း အမြဲတန်းအံသြလို့မကုန်ဘူး ..
ဒီအကြောင်းကို Nature တင်ဖူးပါတယ်။ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံ ကားမပိတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ခေါင်းစဉ်လို့ထင်ပါတယ်။
Yellow Box ဆိုတာ နားမလည်ပဲ အတင်းတိုးချင်တဲ့ ကားသမားတွေရယ်။ လမ်းနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ဆယ်ဘီးကားတွေ ဘုရင့်နောင်ဝင်းထဲပတ်နေပြီး shunting လုပ်တာတွေကြောင့်ပိုပိတ်နေတာပါ။
ဆယ်ဘီးကားတွေ မနက် ၈ နဲ့ ညနေ ၅ နာရီကြားမှာ မြို့တွင်းလမ်းများ (ဘုရင့်နောင်ဝင်းထဲအပါအ၀င်)ပေါ်မှာ ဘီးမလိမ့်ရ လို့ ပြင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကုန်တင် ကုန်ချ ရမယ့်နေရာကို မနက် ၈ မတိုင်မီ ရောက်အောင်သွားပေါ့ ။ရောက်ရာနေရာမှာ ရပ်နေပြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ခေါက်တိုကားလေးတွေနဲ့ လက်တွန်းလှည်းများသုံးသင့်ပါတယ်။
တံတားဆောက်လို့ လမ်းပိတ်တာမဟုတ်ကြောင်းလည်း ဒီလမ်းက မသွားတဲ့သူတွေသိအောင် ရှင်းပြပေးပါနော်။
ရေးသာရေးရတယ်။ ကိုယ်လည်း လက်တစ်ချောင်းပြ အတင်းတိုးတဲ့ ကားတွေကြားညပ်ပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွYellow Box မှာ ကန့်လန့်ကြီးပိတ်ရပ်မိဖူးတယ်။
comment မှာ (-) ပေးတာကဘာကြောင့်ပါလဲ ။
*မကြိုက်လို့လား၊ *မဟုတ်တာကိုရေးလို့လား၊ *သူများရေးထားတာကိုယူလို့လား၊
(-)ပေးမိတယ်ဆိုရင် Sorry ပါ။ ပထမဦးဆုံးတင်တဲ့ Postမှာ စမ်းသပ်ရင်း နှိပ်မိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။